GIANT SCHNOODLE DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Giant Schnoodle Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Giant Schnauzer / eeyaha Noocyada isku dhafan ee loo yaqaan 'Poodle'
Dax Giant Schnoodle oo ah 1 sano jir oo leh Auggie Giant Schnoodle eey
Giant Schnoodle maahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Giant Schnauzer iyo Standard Poodle . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Qashin ka mid ah eeyaha waaweyn ee 'Schnoodle'
Auggie ee Giant Schnoodle eey
Moose Black Giant Schnoodle oo 4 sano jir ah oo qaba dharkiisa oo goglan - '' Moose sifiican ayuu usameynayaa marki uu jiray 1 sano wuxuu dhameeyay sanduuqa waxaana la awooday in lagu aamino guri bilaash ah iyo daarad. Isagu waa nin daacad ah oo gabi ahaanba ilaaliya xubnaha qoyskayga taas oo ila yaabtay. Isagu waa macaane hadda oo waa uu deggan yahay. Wuxuu sifiican ugu qanacsan yahay hurdada habeen iyo maalin oo kaliya oo uu ku caweeyo guriga. Ma jiro qof la kulmay isaga oo necbaa. Wuxuu sifiican ulaxariiraa 3 caruur ah oo deriskeyga ah (da'doodu tahay dhalasho ilaa 6 sano jir) iyo bisadahayaga. Isagu waa mid heer sare ah. Ma bilaabi karo inaan muujiyo sida aan ugu qanacsanahay isaga.
somali bulldog faransiiska bulldog mix
Moose Black Giant Schnoodle oo 4 jir ah oo qaba jaakaddiisa oo dhererkeedu dheer yahay, oo sariirta jiifa
Moose Black Giant Schnoodle markuu 10 bilood jirsaday fadhiga sariirta
Moose madow Giant Schnoodle markuu 10 bilood jiray
weyn pyrenees xadka collie isku qasan eeyo yaryar oo iib ah
Moose the Giant Schnoodle puppy at 5 bilood jir— 'Waxaan ahay 5'8' oo markuu istaagayo 4-ta cagood oo dhan, garbihiisu waxay gaarayaan jilbaha (qiyaastii 1.5 fuudh) iyo marka lugaha dambe ee dambe, cagihiisa waxay ka soo baxaan miskaha (qiyaastii 3.5 fuudh). Wuu firfircoon yahay oo habeen kasta 9 saac ayuu ku tartamaa guriga. Wax dhibaato ah kuma qabo inkasta oo aan u haysan jirnay Poodle caadi ah. Aad ayaan ugu faraxsanahay isaga. Si dhakhso leh ayuu wax u bartaa oo had iyo jeer aad ayuu u xiiseeyaa inuu iga farxiyo. Aad ayuu u feejigan yahay. Wuxuu ku fiican yahay fardahayga. Wuxuu bartay amarka ‘fadhiiso’ 2 maalmood gudahood markuu gurigayga yimid. Waxaan gurigiisa ku jabnay da'da 3 bilood. Waxaan u maleynayaa inay taasi aad u wanaagsan tahay marka loo fiiriyo inuu jiray 2 bilood markii aan helnay. Si dhakhso ah ayuu u degaa habeenkii oo isla markiiba wuu seexdaa. Waxaan kula talin lahaa Giant Schnoodle qofkasta oo ku nool nolol xoogaa firfircoon. Magaciisu waa moose. Wuxuu sidoo kale ogyahay 'ka tag,' 'joog,' hoos, 'iyo' MAYA. ''
Moose the Giant Schnoodle sida eey yar oo jira 5 bilood
Eeg tusaalooyin badan oo Giant Schnoodle ah
Giant Schnoodle Sawirada 1
qarashka qalliinka eeyaha yar yar
mucjiso bernard weyn pyrenees qas isku iib ah
Feedhyahan feer isku qasan madow iyo caddaan
5 bil pitbull rednose jir